eHimalayatimes | यौन र जीवन | सेक्समा चरम आनन्द र यसको उचित समय
20th June | 2018 | Wednesday | 2:56:33 PM
सेक्समा चरम आनन्द र यसको उचित समय
POSTED ON : Saturday, 05 August, 2017 (5:15:40 PM)
हिमालय टाइम्स काठमाडौं । सम्भोगका बेला दुवै पक्षबीच राम्रो समझदारी हुनु पर्दछ । एकले अर्कोको भावना बुझेर सोही मुताविक भूमिका खेल्यो भने सम्भोग आनन्ददायी हुने कुरामा दुईमत छैन । प्रमुखत एकले अर्कोको मनोभावनाको कदर गर्नै पर्दछ । यदि त्यसो नगरे सेक्सबाट पाउनुपर्ने सन्तुष्टि प्राप्त हुन सक्दैन, न त पार्टनरबीच भावनात्मक निकटता नै पैदा हुन्छ । सम्भोगका बेला महिला र पुरुष दुबैले आफ्नो पार्टनरको भावना र उसको चाहनाको ख्याल गर्न सक्नुपर्छ । तबमात्र सेक्स मज्जा लिन सकिन्छ ।
पाकक्रिडाका विभिन्न तरिका अबलम्बन गर्ने क्रममा आत्मविश्वासी बन्न सकिन्छ । मुखमैथुन तथा अन्य प्रक्रिया अवलम्बन पाट्नर खुशी भए त्योपनि अबलम्बन गर्नु उचित हुन्छ । सम्भोगका आधुनिक तरिका तथा आसनको मामिलामा उदार बन्न सक्नु पर्दछ । त्यसकारण स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै सेक्सलाई बढिभन्दा बढि आनन्ददायी बनाउनका लागि विभिन्न तरिका अपनाएर गरिने सेक्सले बढी आनन्द दिन्छ ।
सेक्सका लागि उपयुक्त समय कुन होला ? प्राय सबैको जिज्ञासा हुने गर्दछ । यस बिषयलाई लिएर बिभिन्न टिका टिप्पणी भएका छन् । शनिबारका दिन राती ११ बजे भन्दा पहिले गरिएको सेक्सले चरम आनन्द दिने एक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
बेलायतमा गरीएको सर्वेक्षणका अनुसार धेरै मानिसहरु सातामा एक पटक पार्टनरसँग सेक्स गर्न चाहेका थिए ।
विशेषरुपमा सर्वेक्षण गरिएको यस बिषयमा २ हजार जना सहभागी थिए । ६५ प्रतिशत मानिसहरुले रात १० बजेपछि ११ बजेको समयलाई सेक्सका लागि छानेका छन् । ६ प्रतिशतले बिहान ७ बजेदेखि ८ बजेसम्म सेक्सका लागि छानेका थिए ।
सर्वेक्षणले यो कुरा पनि प्रष्ट पारेको छ की सेक्स गर्नुअघि बेलायतीहरु फोर प्ले गर्न धेरै चाहन्छन् । ७८ प्रतिशतले सेक्सका लागि बेडरुमलाई राम्रो स्थान मानेका थिए । एजेन्सीको सहयोगमा
कति बर्षको उमेरलाई महिलाको सेक्सी उमेर मानिन्छ ?
: Saturday, 16 June, 2018 (6:09:38 PM)
: Monday, 11 June, 2018 (7:52:00 PM)
मुड अनुसार गर्भधारणको सम्भावना
: Sunday, 10 June, 2018 (6:29:34 PM)